အလူမီနီယမ် Tubes Induction Brazing လုပ်ငန်းစဉ်
ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ရန်နှင့် သတ္တုအပူပေးခြင်း၏ အပူသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန်၊ သော induction brazing နည်းပညာကို အဆိုပြုထားသည်။ ဤနည်းပညာ၏အားသာချက်မှာ brazed အဆစ်များသို့အပူပေးသောတည်နေရာအတိအကျတွင်အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်သည်။ ဂဏန်းဆင်တူခြင်း၏ရလဒ်များအပေါ်အခြေခံ၍ ၎င်းသည်အလိုရှိသောအချိန်အတွင်း brazing temperature ကိုရရှိရန်လိုအပ်သော parameters များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သတ္တုများ ချိတ်ဆက်စဉ်အတွင်း သတ္တုများအပေါ် မလိုလားအပ်သော အပူဒဏ်ကို ရှောင်ရှားရန် ဤအချိန်ကို လျှော့ချရန် ဖြစ်သည်။.ကိန်းဂဏာန်းပုံတူခြင်း၏ ရလဒ်များက လက်ရှိကြိမ်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ပေါင်းစပ်သတ္တုများ၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာများတွင် အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကို အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စေကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မြင့်တက်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့်အတူ၊ ဘရိတ်အပူချိန်သို့ ရောက်ရန် လိုအပ်သည့် အချိန်ကို လျှော့ချနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အလူမီနီယံ၏ induction brazing ၏အားသာချက်များ
အလူမီနီယမ်အောက်ခံသတ္တုများ၏ ကျဉ်းမြောင်းသော အပူချိန်လုပ်ငန်းစဉ်ပြတင်းပေါက်နှင့် တွဲလျက်အသုံးပြုသော ဘရားဇီးသတ္တုစပ်၏ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းသည် မီးရှူးတိုင်ကို ဖောက်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလူမီနီယံကို အပူပေးနေစဉ် အရောင်ပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်းသည် အလူမီနီယမ်သည် သင့်လျော်သော brazing အပူချိန်သို့ရောက်ရှိသွားကြောင်း အရိပ်အယောင်မျှမပြနိုင်ပါ။ Torch brazing လုပ်သောအခါတွင် Braze အော်ပရေတာများသည် variable အများအပြားကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ယင်းတို့အထဲတွင် မီးတိုင်ဆက်တင်များနှင့် မီးအမျိုးအစား ပါဝင်သည်။ မီးရှူးတိုင်မှ အကွာအဝေးကို ကြေမွနေခြင်း၊ မီး၏တည်နေရာနှင့်ဆက်စပ်နေသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ နှင့် ပို.
အသုံးပြုရန် စဉ်းစားရမည့် အကြောင်းရင်းများ သော induction အပူ အလူမီနီယံ ချည်နှောင်သောအခါတွင် ပါဝင်သည်။
ရွေးချယ်မှု (ဒေသအလိုက်) အပူ
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် ပေါင်းစပ်မှု
အံဝင်ခွင်ကျဘဝနှင့် ရိုးရှင်းမှုတို့ကို တိုးတက်စေသည်။
ထပ်တလဲလဲလုပ်နိုင်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော brazed အဆစ်များ
အလူမီနီယံ အစိတ်အပိုင်းများ ၏ induction brazing သည် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းအပေါ် များစွာမူတည်ပါသည်။ သော induction အပူကွိုင် သံလိုက်အပူစွမ်းအင်ကို ကြေစေရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို တစ်ပုံစံတည်း အပူပေးနိုင်ရန်၊ သို့မှသာ ဘရာဇီယာသတ္တုစပ်သည် အရည်ပျော်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ စီးဆင်းနိုင်စေရန်။ မှားယွင်းစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော induction coils သည် အချို့နေရာများတွင် အပူလွန်နေပြီး အခြားနေရာများတွင် အပူစွမ်းအင် လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်းကြောင့် မပြီးပြတ်သော braze joint ကို ဖြစ်စေသည်။
ပုံမှန် brazed အလူမီနီယမ်ပြွန်အဆစ်အတွက်၊ အော်ပရေတာတစ်ခုသည် အလူမီနီယမ်ပြွန်ပေါ်တွင် flux ပါ၀င်လေ့ရှိသော အလူမီနီယံကြေးနန်းကွင်းကို တပ်ဆင်ပြီး ၎င်းကို အခြားသော တိုးချဲ့ပြွန် သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့အံဝင်ခွင်ကျတစ်ခုထဲသို့ ထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက် အစိတ်အပိုင်းများကို induction coil ထဲသို့ထည့်ကာ အပူပေးသည်။ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင် ဆံချည်မျှင်မျှင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် သတ္တုအရည်ပျော်ပြီး အဆစ်ကြားထဲသို့ စီးဆင်းသွားသည်။
အဘယ်ကြောင့် induction braze နှင့် torch braze အလူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများ?
ရှေးဦးစွာ ယနေ့ခေတ်တွင် ပျံ့နှံ့နေသော ဘုံအလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော ဘုံအလူမီနီယံကြေးခွံများနှင့် ဂဟေဆက်များအကြောင်း အနည်းငယ်ဖော်ပြပါ။ Brazing aluminium အစိတ်အပိုင်းများသည် brazing copper အစိတ်အပိုင်းများထက် များစွာပိုမိုခက်ခဲသည်။ ကြေးနီသည် 1980°F (1083°C) တွင် အရည်ပျော်ပြီး အပူပေးသောအခါ အရောင်ပြောင်းသည်။ HVAC စနစ်များတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1190°F (643°C) တွင် အရည်ပျော်လာပြီး ပူလာသောကြောင့် အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သော အမြင်အာရုံများကို မပေးဆောင်ပါ။
အလူမီနီယံအတွက် အရည်ပျော်ခြင်းနှင့် သံတုံးအပူချိန်ကွာခြားချက်၊ အလူမီနီယံအခြေခံသတ္တု၊ ကြေးနန်းသတ္တုနှင့် ကြေစေမည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ထုထည်ပေါ်မူတည်၍ အလွန်တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသုံးများသော အလူမီနီယံသတ္တုစပ်နှစ်ခု၊ 3003 စီးရီးအလူမီနီယမ်နှင့် 6061 စီးရီးအလူမီနီယမ်တို့၏ အပူချိန်ခြားနားချက်နှင့် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသော BAlSi-4 braze alloy ၏အရည်၏အပူချိန်သည် 20°F ဖြစ်သည် - အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသော အပူချိန်လုပ်ငန်းစဉ်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ပါသည်။ တိကျသောထိန်းချုပ်မှု။ အလူမီနီယမ်စနစ်များဖြင့် သတ္တုစပ်များရွေးချယ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မှာ သတ္တုစပ်၏ အခဲအပူချိန်အောက်တွင်ရှိသော အပူချိန်တွင် သတ္တုစပ်ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ရောနှောပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
AWS A5.8 အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။ အမည်ခံ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု Solidus °F (°C) အရည်°F(°C) Brazing Temperature
BAIsi-၃ 86% Al 10% Si 4%Cu 970 (521) 1085 (855) 1085~1120°F
BAISI-4 88% aL 12%Si 1070 (577) 1080 (582) 1080~1120°F
78 Zn 22% အယ်လ် 826 (441) 905 (471) 905~950°F
98% Zn 2%Al 715 (379) 725 (385) 725~765°F
ဇင့်ကြွယ်ဝသောနေရာများနှင့် အလူမီနီယံကြားတွင် galvanic corrosion ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ပုံ 1 တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဂယ်လက်ဗနစ်ဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ဇင့်သည် အမွန်မြတ်နည်းပြီး အလူမီနီယမ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက anodic ဖြစ်တတ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေကွာခြားမှု နည်းပါးလေ၊ သံချေးတက်နှုန်း နည်းပါးလေဖြစ်သည်။ ဇင့်နှင့် အလူမီနီယမ်ကြား အလားအလာ ကွာခြားမှုသည် အလူမီနီယမ်နှင့် ကြေးနီကြား အလားအလာထက် နည်းပါးသည်။
အလူမီနီယမ်ကို ဇင့်အလွိုင်းဖြင့် ကြေသွားသောအခါတွင် အခြားသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ pitting ဖြစ်သည်။ ဒေသရှိဆဲလ် သို့မဟုတ် pitting corrosion သည် မည်သည့်သတ္တုတွင်မဆို ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အလူမီနီယမ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ဆီဂျင် (အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်) နှင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် မာကျောပြီး ပါးလွှာသော ဖလင်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော်လည်း၊ ဤအကာအကွယ်အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါတွင် အလူမီနီယမ်သည် ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ အဖြည့်ခံသတ္တုသည် ကြာရှည်သွန်းသွားလေလေ၊ ပျော်ဝင်လေလေ ပြင်းထန်လေဖြစ်သည်။
အလူမီနီယမ်သည် ဘရိတ်ကွင်းအတွင်း အကြမ်းခံသော အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ဖလပ်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ Fluxing aluminium အစိတ်အပိုင်းများကို brazing မလုပ်မီ သီးခြားလုပ်ဆောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် flux ပါဝင်သော အလူမီနီယံ brazing alloy ကို brazing process တွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အသုံးပြုထားသော flux အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ (corrosive vs. corrosive non-corrosive) ကို brazing လုပ်ပြီးနောက် flux residue ကို ဖယ်ရှားရမည်ဆိုပါက နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ပါဝင်နေသောပစ္စည်းများနှင့် မျှော်မှန်းထားသော brazing temperatures ပေါ်မူတည်၍ brazing alloy နှင့် flux ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များရယူရန် braze and flux ထုတ်လုပ်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား နည်းပညာများ Tags: အယ်လ်ပြွန် induction brazer, လူမီနီယံကြေးနီ, အလူမီနီယံပိုက် induction brazing, အလူမီနီယမ်ပြွန်များ ချည်နှောင်ခြင်း။, အလူမီနီယမ်ပြွန်များ induction brazing, induction aluminium brazer ကိုဝယ်ပါ။, induction လူမီနီယံ brazer, induction လူမီနီယမ် Brazing, induction အလူမီနီယမ်ပြွန် brazing, induction Brazing လူမီနီယမ်, သော induction brazing အပူပေးစက် post navigation